Qeybta 1. Dhammaan Apps waa la tirtiri karaa ka iPhone
Qaybta 2. Sidee xagga iPhone Delete Apps
Qaybta 3. Sidee xagga iPhone App Delete Data
Qaybta 4. Hot iPhone Games
Jawaabta oo gaaban su'aasha kor ku noqon lahaa MAYA! Iyagu ma awoodo. Tan iyo markii ay jiraan barnaamijyadooda badan stock in aad iPhone u baahan yahay inuu sii fiican u shaqeyo, ama ugu yaraan sida telefoonka caadiga ah, aad ka saari kara oo kaliya barnaamijyadooda soo xulay aad iPhone, gaar ahaan kuwa ay tahay in aad ku rakiban gacanta (barnaamijyadooda dhinac saddexaad). Hoos waxaa ku qoran liis ay ku qoran ah barnaamijyadooda yar oo aan la tirtiri karaa ka iPhone alla:
Photos iyo Camera
Tan iyo maqnaanshaha ay barnaamijyadooda ku xusan dhigi lahaa iPhone jiritaanka aan macna lahayn, lama saari karo telefoonka.
Sidii hore u soo sheegnay, Chine oo dhan aan la tirtiri karaa ka iPhone. Talaabooyin fudud Si kastaba ha ahaatee, kuwa waa la tirtiri karaa waxay u baahan yihiin wax yar in lagu sameeyo si hawsha loo dhammaystiro. Ayaa tallaabo-tallaabo tilmaamaha ku saabsan sida aad tirtirto karaan barnaamijyadooda saari karo ka iPhone la siiyaa hoos ku qoran:
Laga soo bilaabo screen Home ku, ka jaftaa Settings .
Tag Guud> Isticmaalka> Maamul Kaydinta .
Laga soo bilaabo Kaydinta uu furmo suuqa, ka mid ah liiska barnaamijyadooda ', ka jaftaa app in aad rabto in aad tirtirto. (Rasuulka mudaaharaad this.)
Laga soo bilaabo suuqa kala socda, tuubada Delete App .
Laga soo box xaqiijinta in booda ah, tuubada Delete App in app saaro ka iPhone.
Ka dib adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone muddo dheer oo socda Chine badan waxay ku, files junk badan oo data app uu kaydiyaa telefoonka. Guud ahaan, waxaa loo baahan yahay in aad ka saarto barnaamijyadooda aqoonin shaqsi ka iPhone wadajir si ay u tirtirto ay dhiganta files junk ah, oo markaas iyaga dib si caadi ah u isticmaalaan. Kale oo kale waa in la damiyo telefoonka in goobaha warshad.
Labada xal kor ku wanaagsanayn oo kaliya sababtoo ah waxay ahaayeen fursadaha kaliya ee isticmaala iPhone lahaa, ka hor inta Wondershare horumariyo SafeEraser. Iyadoo SafeEraser Wondershare, hadda waxaad si fudud u saarto kartaa junk iyo faylasha kale ku meel gaar ah in ay ku kaydsan ee iPhone muddo ka. Wondershare SafeEraser ayaa diyaar u ah kombiyuutarada labada Windows iyo Mac oo aad kala soo bixi kartaa barnaamijka ka xiriirka hoose la siiyey.
Sida loo ka Your iPhone App saar Data Isticmaalka Wondershare SafeEraser
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare SafeEraser in ay ka saarto xogta app ka iPhone si fudud oo si deg deg ah. Ayaa tallaabo-tallaabo tilmaamaha ku saabsan sida aad u samayn karaa waxa la siiyaa hoos ku qoran:
Isticmaal links kor ku soo bixi Wondershare SafeEraser for your computer. (Wondershare SafeEraser u computer Windows ah waxaa halkan loogu isticmaalayaa.)
Ku rakib barnaamijka iyadoo la isticmaalayo habka loo xirxiro si joogto ah.
Marka lagu rakibay, double-guji toobiye icon in initialize.
Connect aad iPhone in PC isticmaalaya cable xogta oo la geeyey oo ay la socdaan waxaa la.
Sug ilaa wadayaasha ah looga baahan yahay iPhone u xiran yihiin la soo bixi oo ku rakiban.
Marka sameeyo, ka Wondershare SafeEraser ee suuqa kala muhiimsan ee, riix 1-Guji button Nadiifinta (wakiil astaanta Gaetano a).
Sug ilaa SafeEraser uu baaritaanku u files in laga saari karo aad iPhone si aad u nadiifiso xogta app.
Ka dib markii raajo la dhammeeyo, in la hubiyo in ay App ahbaa qashinka Files checkbox la hubiyey.
Hubi ama uncheck ka checkboxes kale sida loogu baahan yahay.
Marka aad ku qanacsan tahay xulashada, guji nadiifinta ka hooseysa.
Sug ilaa SafeEraser Wondershare ilaa nadiifiyaa files iyo markii xogta app waa lagaa saarayaa, xir barnaamijka.
Wondershare SafeEraser 's qaababka kale ee muhiimka ah
Intaa waxaa dheer in ay ka saareen xogta junk ka iPhone, Wondershare SafeEraser sidoo kale bixisaa qaababka badan oo qaali ah in inta badan tartanka kama samayn. Qaar ka mid ah muuqaalada sida in SafeEraser ayaa waxay ku qoran yihiin hoos:
Space Saver - Qalab kuu ogolaanaya in aad ku cadaadisaa sanamyada aad iPhone oo bilaash ah meel ay kaydinta.
Masixi Data Private - Kuu ogolaanayaa inaad si meesha looga saaro dhamaan xogta gaarka loo leeyahay sida farriimaha, taariikhda dhirta, khasnado browser, iwm ka iPhone.
Masixi tirtiray Files - Wuxuu ka caawiyaa in aad si buuxda u wada baabbi'in faylasha hore u tirtiray si ay u noqdaan unrecoverable.
Masixi All Data - gelineya inaad masixi dhammaan xogta ka iPhone si ay u eg cusub.
Ahaanshaha milkiilaha kibirsan ee iPhone, waxay u badan tahay in aad rabin in ay isticmaalaan oo keliya wacaya iyo fariimaha ujeedada. Hoos waxaa ku qoran liis ay ku qoran a kulan yar oo kulul oo aad kala soo bixi kartaa oo ciyaaro aad iPhone:
Age Silent The (Free)
Ciyaarta ayaa la xidhiidha fikradda ah waqtiga safarka meesha aad door hogaanka waa in la badbaadiyo Dadka ka.
Age Silent ayaa lagala soo bixi karaa xiriirka hoose siiyo:
The Journey Down: Cutubka Mid ka mid ah ($ 5 USD)
A midiidinka shidaal oo lagu qasbay inuu naftiisa ula dhaqmayaan xamuulka ah xujooyinka si ay u sahamiyaan qarsoon ee aabbihiis.
Ciyaarta ayaa lagala soo bixi karaa xiriirka hoose ku siiyey;
Waa in aad badbaadin geed 'gaar ah' oo ka dulin xun yihiin in isku dayaya in la dilo waxtarka iyaga u gaar ah.
Botanicula lagala soo bixi karaa xiriirka hoose:
Inta jeer, waxaa ay kulan mobile in ay curiyaan files junk in ay yihiin weyn in le'eg. Thanks to Wondershare SafeEraser in xogta junk ah si fudud looga saari karaa iPhone si ay u kordhin lahaayeen wax-qabadka.
> Resource > iPhone > Sida loo ka Your iPhone Delete Apps